Mourinho ayaa u hanqal horyaalka ingiriiska –
Home WARARKA CIYAARAHA Mourinho ayaa u hanqal horyaalka ingiriiska
Xiddigii hore ee Arsenal, Paul Merson, ayaa u rajeeyay Tottenham Hotspur inay ku guuleysato Premier League xilli ciyaareedkan.
Spurs ayaa si kooban hogaanka u qabatay Axadii markii ugu horeysay muddo lix sano ah ka dib guushii 1-0 ee ay ka gaareen West Brom taas kadib oo weynaysay rajada tobabaraha mourinho inuu kula guuleysto koobka horyaalka ingiriiska kooxda Tottenham.
Kooxda Waqooyiga London ka dhisan ayaa galaya kaalinta labaad ee fasaxa caalamiga ah ka hor Liverpool iyo Chelsea.
Merson, oo la hadlaya Sky Sports, ayaa dareensan in Tottenham ay kula tartami karto hanashada xilli ciyaareedkan tababare Jose Mourinho.
“Spurs ma sii socon kartaa oo ku guuleysan kartaa horyaalka? Ma ahan wax aan macquul aheyn taasna waa sababta oo ah waxay heleen guuleyste taxane ah oo maamule ah. Waxay heleen fursad sababtoo ah Mourinho ayaa mas’uul ka ah horayna wuu ugu guuleystay. Wuu ogyahay waxa loo baahan yahay si khadka looga baxo.
Ciyaartoyda ma sii wadan karaan wax soo saarkii usbuucii, usbuucii? Waqtiga kaliya ayaa sheegi doona, laakiin in Mourinho uu kooxda joogo ayaa iyaga siinaysa faa’iido, ”ayuu yidhi Merson.